FANALEFANA NY FIPARITAHAN’NY COVID-19 : Entanina ny vahoaka hanaraka ireo fepetra ara-pahasalamana
Manoloana ny toe-draharaha misy aty Antsiranana mahakasika ny fisian’ny valanaretina coronavirus aty an-toerana dia voalaza fa hidina hanao fanentanana manerana ny fokontany sy ireo toerana betsaka olona ary hifarana any amin’ny oniversite ireo avy amin’ny CRCO Diana. 10 décembre 2020
Araka izany dia manomboko ny alakamisy 10 desambra ny fidinana ifotony izay hotanterahin’ireo tompon’andraikitra sivily sy Miaramila. Ireo toerana betsaka olona mifanerasera no voalaza fa hokendrena amin’izao hetsika izao, indrindra ao amin’ny oniversite sy ireo faritra manodidina.
Ankoatra izany dia nandraisana fanapahan-kevitra ihany koa ny fanatanterahana fisafoana na « patrouille » ataon’ireo mpitandro filaminana, amin’ny fanentanana ny vahoakan’Antsiranana amin’ny tokony hanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, amin’ny fanaovana arovava sy orona, ny fanajana ny elanelana iray metatra, ireo fihetsika sakana mba hisorohana amin’ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus ity.
Hanamafisana izao fanentanana izao ihany koa ny hanatanterahana izany mivantana eo anivon’ny haino vaky jery rehetra misy aty Antsiranana, ka ireo Mpitondra Fanjakana, ara -pahasalamana no hanatontosa izany.
Azo ambara fa miezaka hatrany amin’ny fifehezana ity areti-mandoza ity ireo tompon’andraikitra aty an-toerana, izay miampy tosika avy amin’ny Fitondram-panjakana.